XOG: Midowga Yurub & Puntland miyey ku heshiiyeen dibu dhiska wadada Gaalkacyo iyo Garoowe isku xirta, oo horey loo musuqmaasuqay.
GAROOWE(P-TIMES) – Kulan gaar ah ayay Garoowe shalay ku yeesheen Ergayga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya oo booqahso ku tagay Puntland iyo Madaxda Puntland oo uu hogaaminayo Madaxweynaha Siciid Cabdullaahi Deni, waxayna ka wada hadleen mashaariicda horumarinta ee Yurub ka wado deegaanadaas.
Warsidaha Puntlandtimes, wuxuu ogaaday in muhiimada ugu weyn ee shirkaas uu ahaa balan ay dhinacyadu horey uga lahaayeen dhismaha dibu dayactirka mashruuca wadada xariirisa Garoowe & Gaalkacyo oo muhiimad weyn ugu fadhida bulshada Soomaaliyeed oo dhan.
Mashruucan horey Madaxweynaha Puntland ayaa u sheegay in ay ka wada hadleen Midowga Yurub oo dib loo fasaxayo, wuxuuna sheegay in ay arrimahan ka wada shaqeynayaan wadajir dawladda iyo Hay’adda GIZ.
Xogaha aan helnay waxay sheegayaan in ay Midowga Yurub shaaciyeen in mashruuca ay dib u soo celiyaan lacagtiisa marka koowaad, marka labaadna ay tahay in la helo cid aamin ah oo shaqadan fulisa, gaar ahaana si toos ah ay gacanta ugu heyn doonto Hay’adda Jarmalka ah ee GIZ oo horeyba mashruucan u maamuleysay.
HALKAAN KA DAAWO WARARKII U DAMBEEYYE
Puntland ayaa balan-qaaday in ay diyaar u tahay fulinta iyo marida dhammaan geedi socodka ay shaqadu ku qabsoomayso, waxayna Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisu muujiyeen in ay diyaar u yihiin in ay fuliyaan mashruucan.
Dawladda Jarmalku, waxay horey u joojisay mashruucan, ka dib markii Xukuumaddii hore ee Puntland ay musuqmaasuqday, waxaana si weyn indhaha loogu hayaa sida ay u maarayso Xukuumaddan, iyadoo la og yahay heerka tayada ee shirkadaha dalka qaarkood oo mashruucan horey u maamulay.
Hay’adda PHA oo horey mashruucan loogu eedeynayo in ay ku bixiso sifo aan sharci aheyn, isla markaasna diiday raacida habraaca saxda ah ee lagu keenay Mashruuca, ayaan hadda la aqoonin in gacanta loo galin doono, waxaana caqabado badan wali ay ku xeeran yihiin Hay’addan oo ay kamid yihiin in aan loo magacaabin Agaasime guud.
Muhiimad weyn ayay bulshada Soomaalida ugu fadhidaa wadadan dibu dayactirkeeda, waxaana masuuliyadda shaqo ee Xukuumadda hadda jirta laga eegayaa sida ay uga soo baxdo sharuudaha ad adag ee ku xiran meelmarinta mashruucan oo horey fashil ay ugula kulantay xukuumaddii hore.